ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): နှစ်သစ်ကူး မှာ အရက်နာကျနေရင် ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ရမလဲ? ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): နှစ်သစ်ကူး မှာ အရက်နာကျနေရင် ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ရမလဲ?
နှစ်သစ်ကူး မှာ အရက်နာကျနေရင် ဘယ်လို သက်သာအောင် လုပ်ရမလဲ?
လူတစ်ချို့ က နှစ်သစ်ကူး ပွဲတော်ကို အပျော် တမ်းည လို့ သတ်မှတ် ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သာမန် အားဖြင့် အရက်သောက်လေ့ မရှိသူတွေပင် နှစ်သစ်ကူး ညမှာ တစ်ညလုံး မူးနေအောင် သောက်ထား ကြပြီး နှစ်သစ် ရဲ့  ပထမဆုံး နေ့မှာတော့ အိပ်ယာထဲ လဲနေ တတ်လို့ပါ။
ဒီတစ်ပတ် Reactions ဆိုတဲ့ YouTube ချန်နယ်လ် ရဲ့  ဇာတ်လမ်း တွဲမှာတော့ သူတို့ဟာ အရက်နာ ကျခြင်းနောက်ကွယ်က သက်ရောက်မှု အဖြစ်စေဆုံး ဓါတုပစ္စည်း တစ်မျိုးကို လေ့လာ ခဲ့ကြပြီး ဘယ်လို ကုသ ရမယ်ဆိုတဲ့ သဲလွန်စတွေကို ဖော်ပြ ခဲ့ကြပါတယ်။
အရက်နာကျခြင်းရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေဟာ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကွဲပြားမှု ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ စတင်အရက်သောက်သုံးပြီး ၈ နာရီကနေ ၁၆ နာရီ အကြားမှာ အရက်နာကျခြင်း ကို ခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။
အရက်နာကျခြင်း ရဲ့  မနှစ်မြို့ ဖွယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာတွေကတော့ သောကများနေခြင်း ၊ မအီမသာ ဖြစ်နေခြင်း ၊ ပျို့ ခြင်အန်ခြင် စိတ်ဖြစ်နေခြင်းတို့ပါ။
သင်အရက်သောက်လိုက်တဲ့ အခါမှာ ထို ယမကာဟာ သင့်ရဲ့ အသည်းကို ဖြတ်သန်း သွားပြီး ADH နဲ့ ALDH ဆိုတဲ့ ဓါတ်ပြောင်း အကူဒြပ် ၂ မျိုးက ထို ယမကာ ကို လောင်ကျွမ်း ချေဖျက် စေပါတယ်။
ADH ကတော့ ထို ယမကာ ကွန်ပေါင်းတွေကို အက်ဆီတယ်ဒ်ဟိုဒ်ဆိုတဲ့ ဓါတု ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးအဖြစ် ပြောင်းလဲစေပြီး ထို ဒြပ်ပေါင်းဟာ အဆိပ်တစ်ခု အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။
ALDH ကတော့ ယမကာ ကွန်ပေါင်းတွေကို အက်ဆီတိတ် အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး ထို အက်ဆီတိတ်က တဆင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ရေတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်။
လေ့လာမှုများစွာက ပြသခဲ့တာကတော့ အက်ဆီတယ်ဒ်ဟိုဒ် ပမာဏ များပြားနေခြင်းဟာ အမြင်အာရုံ အားနည်းစေခြင်း ၊ မှတ်ဥာဏ် ချို့ ယွင်းစေခြင်း ၊ ပါးစပ် ခြောက်ကပ်ခြင်း ၊ မောပန်းခြင်း နဲ့ အခြား ပင်ပန်းတဲ့ ခံစားမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရက်နာကျခြင်းကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် Reaction အဖွဲ့ရဲ့  အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်ကတော့ မနက်စာအတွက် ကြက်ဥ ကို စားသုံးပေးပါတဲ့။ ကြက်ဥတွေဟာ L-cysteine လို့ခေါ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ် တစ်မျိုးကို စုစည်းပေးနိုင်အားကောင်းပါတယ်။
ထို အက်ဆစ်ဟာ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ အက်ဆီတယ်ဒ်ဟိုဒ် တွေကို ဖယ်ရှားပေးပြီး အရက်နာကျခြင်း ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုလည်း သုတ်သင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ ရေများများသောက်ပေးပါ။ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းဟာ အရက်နာကျခြင်းရဲ့  ဘုံအဖြစ်ဆုံး လက္ခဏာပါ။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းဟာ vasopressor ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးကို ကျောက်ကပ်အတွင်းမှာ ခမ်းခြောက်သွားစေပါတယ်။
ထို ဟော်မုန်းဟာ သင့်ကျောက်ကပ်ရဲ့ ဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ဘယ်လောက်ထိ တောင့်ခံပေးနိုင်သလဲဆိုတာကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရေသောက်ရင် ပြန်မူးသွားတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ရေသောက်ပေးခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ ကျောက်ကပ်ကို ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာစေနိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ သင်ဟာ နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ကို တစ်ညလုံးနီးပါးဖြတ်သန်းထားရပြီး မနက်ပိုင်းမှာလည်း လုံလောက်စွာ မအိပ်လိုက်ရပဲ အလုပ်ကိစ္စ ရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာ ရုတ်တရတ် ထလာရတဲ့အတွက် သင့် ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ သာမန်အတိုင်းလှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ကတော့ အချိုမှုန့် ကို အနည်းငယ်စားသုံးပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
အရေးအကြီးဆုံးအနေနဲ့ သတိပြုရမှာကတော့ အရက်မသောက်ခင်မှာ အစာအနည်းငယ်စားပေးပါ။ အစာမရှိပဲ အရက်သောက်ခြင်းဟာ သင့်အစာအိမ်ကို သင်ဖျက်ဆီးနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်အားလုံး ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
Originally published at - http://health.thithtoolwin.com/2016/01/blog-post.html
Posted by Te Tee at 11:45 PM